20 mfm munamato mapoinzi ekuda kwaMwari | MINYENGETERO MARI
Chitatu, July 28, 2021
musha Pfungwa dzemunamato 20 mfm minamato mapoinzi ekunzwirwa tsitsi
13 Uye Ishe uchakuita musoro, kwete muswe; iwe uchave uri pamusoro pega, uye haungavi pasi; kana uchiteerera mirairo yaJehovha Mwari wako, yandinokuraira nhasi, kuti uchengete nokuiita.
Nhasi tanyora makumi maviri mfm munamato mapoinzi kufarirwa naMwari. Aya mfm munamato mapepa akafuridzirwa naDkt Odukoya wegomo remoto uye zvishamiso hushumiro. Favor is Mwari kukupa izvo zvausingakwanise kupihwa nebasa rako. Kana ivo vachifarira Mwari ari pamusoro pako, mikova isingazivikanwe uye isinga bvumirwe yakavhurwa pamberi pako. Favour vakatora Joseph kubva mutirongo vakaenda naye kumuzinda, tsitsi dzakatora David kubva mugwenzi kuenda kumuzinda, moyo wakanaka Daniel neshamwari dzake nhatu dzechiHebheru, kufadza kwakaita kuti Nehemia abve pamutungamiriri wenguva dzose mukokeri kuna gavhuna.
Munamato wangu kwauri ndewekuti, favawo iyoyo ichakupindura nhasi muzita raJesu. Mwana wega wega Mwari anodiwa, asi maChristu mazhinji achiri muhusungwa nhasi nekuti dhiabhori imbavha inouya kuzoba izwi raMwari kubva pamoyo yedu. Paunoshaya izwi raMwari muhupenyu hwako, ukashaiwa nyasha uye kana ukashaiwa nyasha, unoshorwa. Ino mfm munamato manongedzo ekuda kunzwirwa tsitsi anozokusimudzira mumweya kuti utore Mwari wako akagadzwa pamweya makomborero enyasha. Paunonamata izvi minamato yemunamato, murume wako wemweya anozopihwa simba uye hupenyu hwako hwekufunda huchawedzerawo mazwi ese ekuzivisa aunotaura mumunamato uyu zvichaitika muzita raJesu. Usanete, shamwari yangu, namata munamato uyu nhasi ugamuchire nyasha dzako dzamwari.
1. Baba ndinokutendai nekuda kweshungu dzenyu pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu
2. Ini ndinoparura nhasi kuti nyasha dzaMwari dzinozoratidza mukushanda kwangu kese muzita raJesu.
3. Ndinozivisa kuti ruoko rwaMwari rwuri pamusoro pangu pane zvese zvandinoita munaJesu zita.
4. Nekuda kwekuda kwako, mikova isingaite yekubudirira ichavhurirwa ini muzita raJesu.
5. Nenyasha dzako dzisina kukodzera, ndinoparidza kuti ndichave musoro chete kwete muswe muzita raJesu.
6. Ini ndinoparidza kuti ndinofarirwa nevanhu vese, kusanganisira madzimambo muzita raJesu.
7. Nekuda kwekunakirwa kwako, hapana chombo chakagadzirirwa kundirwisa chinobudirira muzita raJesu.
8. Ini ndinoparidza kuti boka rose rakaipa rinondimukira, richabaya mumusoro wevavengi vangu muzita raJesu
9. Sezvazvaive mumazuva aJoseph, munhu wese aironga zvakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, iyeye zvakaipa zvakadai zvidzokere kwavari uye atendeukire kwandiri kunopupura muzita raJesu.
10. Kungofanana nemazuva aDaniel neshamwari dzake, ngativei nerusununguko kundisiyanisa nevezera rangu muzita raJesu.
11. Ini ndinotaura kuti nekuda kwerunako, ini ndiri nani kakapetwa kagumi pane vezera rangu
12. Ini ndinoparidza kuti nekuda kwerunako, ndinonzwisisa kupfuura vadzidzisi vangu.
13. Ini ndinoparidza kuti nekuda kwerunako, zvese zvandinoita zvinobudirira muzita raJesu.
14. Nekuda kwekunakirwa kwako, ini ndinofamba mukushamisa kwemweya muzita raJesu.
15. Nekuda kwekunakirwa kwako, ini ndine huchenjeri hweshura muzita raJesu.
16. Nekuda kwenyasha dzako Baba vangu, zvivi zvangu zvese, zvakapfuura, zviripo uye nezveramangwana zviri kukanganwira muzita raJesu.
17. Baba, vese vanotsvaga kudonha kwangu ngawira nekuda kwangu muzita raJesu.
18. Baba, vese vanondikomborera ngavarumbidzwe narinhi.
19. Ani naani anondituka ngaatukwe newe muzita raJesu.
20. Baba ndinokutendai nekuda kwekusaguma kwako tsitsi pane hupenyu hwangu muzita raJesu.
Previous nyaya15 minamato manongedzo inopesana nemidzimu inodzivisa
inotevera30 minamato mikana yekukunda vavengi vako
kendi Ndira 12, 2019 At 10:27 pm
Counterpoint # 9 - 1 Peter 3: 9 Usatsiva chakaipa nechakaipa kana kutuka nekutuka. Pane kudaro, dzosera chakaipa nechikomborero, nekuti ndizvo zvawakadanirwa kuti ugare nhaka chikomborero.
Counterpoint # 19 - Mateo 5:44: "Asi ini ndinoti kwauri: Ida vavengi vako, Ropafadza avo vanokutuka, ita zvakanaka kune avo vanokuvenga, uye nyengeterera avo vanokushusha nekukutambudza." VaRoma 12: 14-20 inowedzera:
“ROPAI VAYA vanokutambudzai; BATSIRA UYE USASHURE ... Usatsiva munhu chakaipa nechakaipa ... Kana zvichikwanisika, garai murunyararo nevanhu vese. Vadiwa, musazvitsivira ... Kana muvengi wako aine nzara, mupe chikafu. Kana aine nyota, mupe mvura anwe. Nekuti mukuita izvi, ungatutira mazimbe emoto pamusoro wake. Usakundwa nezvakaipa, asi ukunde zvakaipa nezvakanaka.
Sahr Moses Yonga Chikumi 18, 2020 Panguva ya11: 52 pm
UNOZIVA HERE Kuti BHAIBHERI RINOTAURA KUTI UNOGONA KUTI VANZVIPI HAUSI KUTI URARame, VAVONESE ROPA RAKATAURA UYE VANODZVIRA ZVAKAWANDA?
Fransoa June 20, 2020 Pa 3: 56 am
Baba ndiri kukumbira nyasha dzisina kuwanikwa kubva kwamuri. Komborerai isu uye ngatiwane tsitsi pane zvese zvatinoita. Ini ndinouya kuzopesana nemweya wega wega wekubvunda uye kubvisa nhumbu pamucheto wekubuda. Ini ndinotema chirevo, nekuti hakufambi, kana ruoko, rwakagadzirirwa kutirwisa, ruchabudirira. Tenderai mutsauko utisiyanise nevamwe muzita raJesu. Ini ndinonamata nekuda kwekushomeka kwemari uye ndoisa hunyoro hwangu mumaoko ako Mwari. Izvo zvichanzwirwa tsitsi nevanoita sarudzo munaJesu vangatumidza zita. Zuva rangu rakanzwirwa moyo nemi imi Ishe. Ini ndinonamata kuti hunhu hwamwari husingazombobve pamurume wangu. Ini ndinonamata ndichivimba uye ndichitenda muzita raJesu ..
Fransoa Kurume 8, 2020 Pa 3: 12 am
Ishe ndinonamata kuti iwe murume wangu pamwe unoburitswa mumasokisi muzita raJesu. Huya kubudikidza naIshe uye nyaya yake ifarirwe nemunhu wese anobuda amubatsire. Tsitsi dzichamuwanira uye zita rekuremekedza richawana kufarirwa nemunhu wese anozvinyora muzita raJesu. Nguva yekubudirira iri pano muna Jesu. Ndokumbirawo muchengete isu nevana muminamato murume waMwari. Matenga ngavazaruke pamusoro penyaya iyi muna Jesu.
taiye ibidun Kubvumbi 19, 2020 At 2:39 pm
Baba ngavanzirwe tsitsi vanondiwana munzvimbo yangu yebasa
Susan Chikumi 6, 2020 Panguva ya9: 31 pm
Baba ngoni dzenyu ngadziwane kwandiri
Fransoa June 20, 2020 Pa 3: 59 am
Ishe tenderai kuti mundifarire. Maka huma yangu nemurume wangu zvakanaka. Tichawana favour munzvimbo dzese dzatinoenda. Muzita raJesu ndinonamata amen
Adekunle Samson Chikunguru 1, 2020 At 9:41 am
1.Oh Ishe Mwari wangu nenyasha dzenyu regai ndisimudzirwe.
2. Baba mumwedzi uno nyowani regai hupenyu hwangu uone hunhu hwenyu hwepamoyo munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu muna Jesu zita amen.
john M. isaac Chikunguru 1, 2020 At 11:41 am
Ini ndinopesana nenyoka dzese dza satanic dzakapihwa pahupenyu hwangu.
hope dzese dzakashata dzakapihwa pane hupenyu hwangu kuyedza kuratidza, ndinoraira moto waMwari kuti uuparadze muzita raJesu
tsitsi dzaMwari dzandiwanira muzita raJesu
Sam Mbudzi 11, 2020 Na11: 04 pm
Ndinoshuva kukoshesa munhu waMwari, mutakuri wechiratidzo ichi; mamwe maUNCTIONS kuti ashande muhupenyu nehushumiri muzita raJesu ameni! Ini ndakakomborerwa zvinyorwa zvako ndatenda.
20 minamato Pfungwa dzekununurwa Kubva muupombwe
30 Minamato Minamato Yekuratidzira Kwezvibereko Zvemweya
75 Munongedzo Wenamato Pesimba Pamasimba Emba Yangu Baba